Dr Khin Maung Win - Shwe Yi Win: April 2016
ဒေါ်ခင်မျိူးချစ် ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ရှာပုံတော်
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း ( သ ချာင်္ )
မေမေ ဒေါ် ခင်မျိုးချစ်သည် သူ၏ ကိုယ် ရေး အထုပ္ပတ္တိ QUEST FOR PEACE (ငြိမ်းချမ်း ရေး ရှာပုံ တော် ) ကို The Working Peoples’ Daily သတင်းစါတွင်၁၉၆၄ က ရေးခဲ့ စဉ် အခါက စွန်း လွန်းတရား အားထုတ် ခြင်း ကြောင့် သူ၏ ဘ၀ ပြောင်း သွား ပုံကို စာတမ်း တစ်ခု ရေးသား ပြု စု ရန် သာရည်ရွယ် ခဲ့ ပါ သည်။သို့ရာတွင် စွန်း လွန်းတရား အားမ ထုတ် မီ က ဗုဒ္ဓ ဘာသာအပေါ် ယုံ ကြည်မှု ပျက် ပြားခဲ့ ပုံ အကြောင်း များ ကို ပြော ရန် လို ပါ သည်။ထို အခါ ၄င်း မ တိုင် မှီ က အဖိုး နှင့် အတူ နေ ခဲ့ သော မိ ရိုး ဖ လာ ဗု ဒ္ဓ ဘာ သာဝင် ကလေး ဘ၀ ကို လည်းဖေါ် ပြ ရန် လို အပ် လာ ပြန် ပါ သည်။
ဒေါ်ခင် မျိုးချစ် ဧ။် Quest For Peace ( ငြိ မ်း ချမ်း ရေး ရှာ ပုံ တော် )အမည် ရှိ ကို ယ်ရေး အ ထုပ္ပ တ္တိ ကိုယခင် က မူ ကြ မ်းများ တွင် ခေါ င်း စဉ်အ မျိုး မျိုး ဖြ င့်ရေး သား ခဲ့ ဖူး ပါ သ ည် ။၄င်း တို. ထဲ မှ နှ စ် ခု မှာ ... Manyahouse of Life Hath Held Me ( ခန္ဓာ အိမ် များ စွာ တို.သည် ကျွန်ု ပ်ကိုဤ သံသ ရာ ထဲ မှ မ ထွက်အောင်တွယ် ထား ကြ ဧ။် ။ ) နှ င့် House of Life ( ဤ ခ န္ဓာအိ မ် ) ဟူ ၍ ဖြ စ် သည် ။
ထို ခေါင်းစဉ် နှစ်ခု သ ည် Sir Edwin Arnold ( ဆာ အက် ဒွင် အာနိုး ) ဧ။် က ဗျာထဲ မှ ဖြစ် သည် ။
ထို ကဗျာ သည် Light of Asia (အာရှ အ လင်း ရော င်) မ ဂ္ဂ ဇ င်း ထဲ တွင် ပါ ၀င် ခဲ့ သ ည်။ ယင်း ကဗျာ ၏ အ ဓိ ပ္ပါ ယ် မှာ ဤ သို့ ဖြ စ် သည် ။
ဤ ခ န္ဓာ အိ မ် များ စွာ တို. သည်
ကျွ နု ပ်ကို -- ဤ သံ သရာ ထဲ မှ မ ထွ က် အောင်
တား ဆီး ပိတ် ပင် ထား ကြ ကု န် ၏ ။
အ စဉ် ပူ ဆွေး စရာ များ ဖြင့် ပြ ည်. နေ သော
ဤ အာရုံ ငါးပါးတို.၏ အကျ ဉ်းထောင်များ
ဟု တင်စား၍ ခေါ် ဆို ထိုက် သော --
ဤ ခ န္ဓာ အိမ် များ စွာ တို. ကို
ဆောက် လုပ်သော တရား ခံ ကို
အ စဉ် မ နား တမ်း ရှာ ဖွေ ခဲ့ ပါ သည်။
ယ ခု တော့ ဤ တ ရား ခံ ကို
တွေ. ပါ ပြီ ။
သင့် ကို ကေါင်းကေါင်း သိ နေ ပါ ပြီ ။
ဤ ဝေဒနာ နံ ရံ ကြီး များ ကို သင် သည်
ဘယ်တော့ မှ မဆောက် ရ တော့ အံ့
လိမ် လ ည်မှုများ ဖြင့် ပြည်. နေ သော
အမိုးသစ်ပင် ကြီး ကို လည်း
မ စိုက် ထူ ရ တော အံ့ ။
သင် ဆောက်ထားခဲ့ သော အိမ်ကြီး သည်လည်း
ပြို ကျသွား လေ ပြီ--
တိုင် များ မှာ လည်း ကျိုး ကုန် လေ ပြီ
ဒါ တွေ သည် မှား ယွင်းသော ယုံကြည် ချက်တွေကြောင့်ပါ။
ယခုတော့ --ဒီ ၀ဋ် က ကျွ တ် ပြီ--
ဒီ သံ သ ရာ က လွ တ် ပြီ ။
Manyahouse of life hath held me နှင့် House of life ဟူသောခေါင်း စဉ်နှစ်ခု နှင့် ပတ် သက်၍ အင်္ဂ လိပ် စာပေပါရဂူ ကြီး နှစ် ဦး ဖြစ် ကြ သော မစ္စ စ် ဂေါ် ဒွို င်း နှင့် ဦး ၀င်းဖေတို. နှစ် ဦးတို. သည် အ ကြီး အ ကျယ်သဘောထား ကွဲ လွဲ ပြီး ငြင်း ကြပုံ ကို မှတ် မိ နေပါသည်။တစ်ဦး(ဘယ်သူမှန်း မသိ) က ပထမ ခေါင်း စဉ် ဖြစ် သော က ဗျာဆန်ဆန် လေး ကို သဘော ကျ သည်။နောက် တစ်ဦး ကမူ ကဗျာ ဆန် ခြင်း သည် လေး နက်မှု ကို ပျက် စီးစေသည် ဟု ယူဆ သည်။ထို. ကြောင့် ရိုးရိုး သားသား ဒုတိယ ခေါင်း စဉ် ကို ပို ၍ သဘော ကျ သည်။မေမေ ဒေါ် ခင် မျိုး ချစ် သည် ထို ပုဂ္ဂိုလ် နှ စ် ဦးစလုံး ကို လေးစားရ ကါး ဘာ လုပ် ရ မှန်း မ သိ ဖြစ် နေသည်။ဤ ကဗျာ ကို ပြန် ဖတ် ရင်း မေမေ စဉ်း စားမိသော နောက် ထပ်ခေါင်း စဉ် တစ် ခု ကို သ တိ ရ မိ ပါ သည်။၄င်း မှာ These Walls of Pain ဖြစ် သည်။သို. သော် ယင်း ခေါင်း စဉ် သည် အ ဓိ ပ္ပါယ် ထပ် ဆင့် ရှင်း ပြ ရန် လို သော ကြောင့် ၎င်း ကို မယူ တော့ ပါ။
နောက် ဆုံး 1964 တွင် Working Peoples’ Daily သတင်း စာတွင် Quest For Peace အ မည် ဖြင်.အ ခန်း ဆက် ထည့် ခဲ့ ပါ သည်။ထို အခန်းဆက် ကိုယ် ရေး အထုပ္ပ တ္တိ ကို စာ အုပ် ထုတ် ရန် ကိစ္စ တွင် စာရေးဆရာ နှ င့် ထုတ် ဝေသူ တို. ကြားသဘော ထား ကွဲ လွဲ ခဲ့ ပါ သည်။ မေမေ ဒေါ် ခင်မျို ချစ် ၏ ရည် ရွယ် ချက် မှာ စွန်းလွန်း တရား အား ထုတ် မှု ကြောင့်သူ ၏ ဘ၀ ပြောင်း သွား ပုံကို တင် ပြရန် ဖြစ် သည်။သို. သော် စာအုပ် ထုတ်ဝေ သူများ သည် တရားအားထုတ်ခြင်း အပိုင်း ကို လုံး ၀ စိတ် မ၀င် စား ပါ။သူ တို ဘက် မှ ဖြစ် နိုင် လျင် တရား ထိုင်သော အ ပိုင်း များ ကို ဖယ် ပစ် ပြီး နိုင် ငံ ရေး လှုပ် ရှား မှု များ အ ကြောင်း ကို သာ ရေး စေ ချင် ပါ သည် ။သို. သော် လည်း စါေ၇းသူ မေမေ ဒေါ် ခင် မျိုး ချစ်အနေ ဖြင့် နိုင်ငံ ရေး ကိစ္စ များကို တရားအားထုတ် သည်. ကိစ္စ များ အတွက် အထောက် အ ကူ ဖြစ်ရုံ မျှ သာရေးရန် ဆန္ဒ ရှိ ပါ သည်။ဥပမာ ဗိုလ် ချုပ် အောင် ဆန်း ၏ အ တွင်းရေး မှုး ဖြစ် လာ သော ဗိုလ် သိန်း ဆွေ နှင့် တွေ. ဆုံ ခဲ့ ပုံ နှင့်ထို ပု ဂ္ဂို လ် သည် မေမေ ဒေါ် ခင်မျိုး ချစ် ၏ တရား ပြ သောဆရာ ဖြစ် လာ ပုံ တို. ဖြစ် သည်။
ဒေါ်ခင်မျိုးချစ် ၏ ကိုယ်ရေးအထုပ္ပ တ္တိ Quest For Peace သည် ပါရ မီ စာ ပေ မှပ ထမ ဦး ဆုံး အ ကြိမ် ထွက် လာပါ တော့ မည် ။ ယင်း အ ထု ပ္ပ တ္တိ ၏ အပိုင်း ဖြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်. Buddhist Pilgrim’s Progressကို (ဗု ဒ္ဓ ဘာသာ ၀င် တစ် ဦး ၏ ခရီး ကြမ်း ) အမည် ဖြင့် ကျွန် တော် ၏ ဘာသာ ပြန် နှင့် အ တူ ၂၀၁၃က ထွက် ခဲ့ ပါ သည်။ ၎င်း အ ပြင် The Ruse and War-time Stories ကို (လမ်း လွှဲ ခြင်း နှင့် စစ် အ တွင်းအတွေ. အ ကြုံ များ) အမည်ဖြင်. ဂျူ နီ ယာ ၀င်း ၏ ဘာသာ ပြန် နှင့်အ တူ ထွက် ခဲ့ ပါ သည်။
Posted by Junior Win at 1:48 AM No comments:
ဒေါ်ခင်မျိူးချစ် ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ရှာပုံတော် ...